Ku tabaruca - Xarunta EcoTechnology
Samee Hadiyad Canshuur-dhimis ah
waxay ku furantahay daaqad cusubKu tabaruc!
Isbedelka cimiladu wuxuu khatar ku yahay deegaanka, caafimaadka, iyo barwaaqada. Nasiib wanaag, waan awoodnaa
si baaxad leh u yareynaya halistaan ​​adoo noqda mid tamarta sifiican u adeegsada isla markaana adeegsada waxyaabo yar
nolol maalmeedkeena. CET waxay la shaqeysaa tobanaan kun oo qof sannad kasta iyo, intay ka badan yihiin
ku dhiirrigeliya weligood sidii ay isbeddel dhab ah u samayn lahaayeen, badiyaa waxay la'yihiin macluumaad iyo qalab loo baahdo
ficil qaado. Waxaa naga go'an inaan gelino awoodda isbedelka gacmaha dadka meel kasta
socodka nolosha iyo xoojinta bulshada, dhaqaalaha, iyo deegaanka.
Waqti la hubaa hubaal la'aan, waxaa lama huraan ah inaan garwaaqsanno in midkeen kastaaba awood u leeyahay
Waan ognahay in tallaabo kasta oo wanaagsan oo aan hadda qaadno ay muhiim u tahay sameynta dhimis macno leh oo ku saabsan raadkeenna kaarboonka oo aan ka caawinno sidii aan u gaari lahayn heerarka muhiimka ah ee loo baahan yahay si looga fogaado saameynta ugu xun ee isbeddelka cimilada.
Waxaan ka shaqeyneynaa gobolka oo dhan si aan ugu xirno dadka iyo ganacsiyada xalalka wax ku oolka ah ee sameeya saameyn la qiyaasi karo. Wadajir ayaan ku kordhin karnaa barwaaqada iyo fayoobaanta waxaana hubin karnaa in jiilalka soo socda ay ku raaxeysan karaan nolol caafimaad leh, oo waarta.
waxay ku furantahay daaqad cusubSamee Hadiyad Maanta
Dhaxal ka tag!
Hadiyadaada dhaxalka ah ee Xarunta EcoTechnology waxay saameyn xoogan ku yeelaneysaa awoodeena inaan dadka ku siino ilo iyo dhiirigelin ay ku qaadaan talaabo lagu xakameynayo saameynta isbedelka cimilada, iyadoo la hubinayo caafimaadka iyo jiritaanka bulshadayada jiilalka soo socda.
Waxbadan Ka Baro Wax Siinta Dhaxalka